I-lira yaseTurkey iphahlazeka isesikhathini sonke esiphansi uma iqhathaniswa nedola laseMelika
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba ZaseTurkey » I-lira yaseTurkey iphahlazeka isesikhathini sonke esiphansi uma iqhathaniswa nedola laseMelika
Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zikaHulumeni • Investments • Izindaba • Abantu • Unomthwalo wemfanelo • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • Izindaba ZaseTurkey
I-lira yaseTurkey iphahlazeka isesikhathini sonke esiphansi uma iqhathaniswa nedola laseMelika.
Ekugcineni, izinqumo zenqubomgomo yemali yaseTurkey azisathathwa yibhange elikhulu uqobo lwazo kepha zithathwa eSigodlweni sikaMongameli.
ILira yaseTurkey isichithe amaphesenti angama-20 kulo nyaka kanti uhhafu wokwehla kwentengo usufike ekuqaleni kwenyanga edlule.
Oweqise kakhulu ezimakethe ezisafufusa kulo nyaka, imali yaseTurkey ithinte inani eliphansi elingu-9.3350 uma liqhathaniswa nedola namuhla.
USociete Generale ubikezele ukusikwa kwamaphoyinti ayi-100 kwalandela ikhefu yibhange elikhulu njengoba i-lira ishelele ku-9.8 uma kuqhathaniswa nedola ngokuphela konyaka.
Owenza kahle kakhulu ezimakethe ezisafufusa kulo nyaka, i-lira yaseTurkey yehle yehla ngokuphelele kunedola laseMelika namuhla.
Imali yaseTurkey ithinte inani eliphansi elingu-9.3350 uma liqhathaniswa nedola ngaphambi kokukhipha okunye ukulahleka. Kwakumi ngo-9.31 ngo-18: 22 GMT.
Abahlaziyi bezezimali babona kuncane ukubuyiswa kwemali yezwe laseTurkey enezinkinga, uma kubhekwa lokho omunye akubize njengokulindelwe ukwehla kwenzalo "engenangqondo" ngasekupheleni kwaleli sonto.
ILira laseTurkey selikhiphe amaphesenti angama-20 kulo nyaka kanti uhhafu wokwehla kwentengo usufikile kusukela ekuqaleni kwenyanga edlule, lapho i- ICentral Bank yaseTurkey iqale ukunikeza izimpawu ezingaqondakali yize ukwehla kwamandla emali kukhuphuke kwasondela emaphesentini angama-20.
ETurkey UMongameli Recep Tayyip Erdogan Sekuyisikhathi eside efuna ukuthi yehliswe imali futhi ithonya lakhe, kubandakanya ukufaka esikhundleni ngokushesha ubuholi obuphezulu bebhange eliphakathi, kubonakala sengathi kuqede ukwethembeka kwenqubomgomo eminyakeni edlule.
Ngemuva kokuncipha kwenani lamaphuzu ayi-100 ngenyanga edlule kuthumele ukuwa kwe-lira, abezomnotho abavotelwe yi-ejensi yezindaba iReuters bahlukene phakathi ngokuthi ngabe ibhange eliphakathi lizokwehlisa amanye amaphuzu angama-50 noma ayi-100 emhlanganweni wenqubomgomo yangoLwesine.
Abanye osomnotho benqabile ukuphendula kule nhlolovo uma kubhekwa ukuthi ibhange elikhulu selingakaqikeleki kanjani, ikakhulukazi ngemuva kokuthi u-Erdogan exoshe amalungu amathathu ekomidi layo lezepolitiki (MPC) ngesonto eledlule, kufaka phakathi nababili ababonakala bengahambisani nokuncishiswa kwamanani.
"Ekugcineni izinqumo mayelana ... nenqubomgomo yezimali azisathathwa yibhange elikhulu uqobo lwazo kepha zithathwa esigodlweni sikaMongameli," kusho abahlaziyi beCommerzbank.
Ngemuva kokuqhaqhazela kwakhe ebhange, Erdogan "Ususe ngempumelelo konke okuphikisana nombono wakhe ongajwayelekile wokuthi amanani aphezulu enzalo abangela ukwehla kwamandla emali aphezulu", abahlaziyi beSocGen babhala encwadini yamakhasimende.
Yize “kungenangqondo” kokuncishiswa kwamazinga manje, “akusekho sizathu sokunikeza izimpikiswano zendabuko kwezomnotho uma kubhekwa isenzo [sebhange elikhulu],” babhala.